Ahoana ny fomba hanafenana sary amin'ny Android handefasana azy ireo soa aman-tsara | Androidsis
Miverina miaraka amina tutorial video Android azo ampiharina vaovao izahay, tamin'ity indray mitoraka ity dia natokana ho an'ireo mpampiasa rehetra izay mitady hanana filaminana faran'izay azo antoka sy azo antoka ny fiainana manokana rehefa mandefa ny sariny amin'ny alàlan'ny Android. Noho izany, anio dia hanazava aminao vahaolana matotra izay hanampy antsika aho encrypt sary avy amin'ny Android handefasana azy ireo soa aman-tsara Amin'ny alàlan'ny fampiharana mailaka na fandefasan-kafatra mamela azy io, toy ny Telegram for Android.
Hahatanteraka izany amin'ny fomba tena tsotra sy tsotra isika miaraka amin'ny fampidinana sy fametrahana fampiharana maimaimpoana ho an'ny Android izay hahafahantsika misintona mivantana avy amin'ny Google Play Store, fivarotana fangatahana ofisialy ho an'ny Android. Fantatrao izao, raha te hahalala ianao omeo fiarovana fanampiny ny Android anao ary indrindra amin'ny sary sy hafatra alefanao amin'ny alàlan'ny media sosialy na mailaka, Manoro hevitra anao aho mba tsy hanadino antsipirihany momba ilay horonan-tsary nametraka anao teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity, ary koa ny tsindrio eo amin'ny «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity» hanana fidirana mivantana amin'ny fisintomana ny rindranasa ilaina hanatanterahana azy.
Ny fampiharana izay resahina, a fitaovana ilaina amin'ny fiarovana sy tsiambaratelo ny sarinao, na handefa azy ireo na hitahiry azy ireo voahidy amin'ny Android, mamaly ny anaran'ny Hafatra miafina Elite, izay avelako rohy mivantana anao ho an'ny fisintomana, eo amin'ny faran'ity lahatsoratra ity.
1 Fa inona no atolotry ny Secret Message Elite antsika?
2 Sintomy ny hafatra miafina Elite maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Fa inona no atolotry ny Secret Message Elite antsika?
Hafatra miafina Elite avy amina mpampiasa interface ho tsotra sy intuitive araka izay azo atao, manome antsika ny mety manafina na manafoana sary sy hafatra an-tsoratra raha mbola ireo sary na hafatra ireo no nanafina ny azy.
Endrika mifarana amin'ny tovana -ar ny famoahana azy dia tsy azo idirana raha tsy amin'ny alàlan'ny fampiasana fampiharana mitovy ary fotsiny cFahalalana ny lakilen'ny encryption izay nampiasainay tamin'ny fanaingoana ireo sary na hafatra.
Ny fampiasana ny rindranasa hanafina na hanafoana ireo sary na hafatra an-tsoratra dia tsotra toy ny mifidy isa manan-danja, isa izay hofidintsika araka ny itiavantsika azy ary miaraka amina tarehimarika na tarehimarika marobe araka izay tadiavintsika, izay, araka ny lojika ary mazava ho azy fa tsy maintsy ho fantatsika ny famoahana ireo hafatra na sary voarindra amin'ny alàlan'ny fampiharana. Raha vantany vao voafidy ity lakile numerika ity dia tsy mila manoratra fotsiny ilay hafatra ho voahidy na hongotana na tadiavo ny sary hanafina na hanaisotra ary avy eo tsindrio ny bokotra mifanentana aminy. Mora sy tsotra!
Toy izany koa, raha handeha handefa hafatra an-tsoratra misy encrypt miaraka amin'ilay fampiharana isika, hafatra an-tsoratra na sary miafina, ilay olona na olona hafa izay andefasantsika ireo hafatra na sary ireo, toa ny lojika sy azo inoana, ho fanampin'ny ny fananana ny rindranasa alaina sy apetraka amin'ny Android-nao dia mila manao izany koa ianao fantaro teo aloha ny lakile numerika nampiasaina ho an'ny encryption mitovy amin'izany.
Na dia nanazava aza ny priori dia toa somary manahirana anao izany, ny marina dia mora kokoa noho ny toa izany, izany no namelako anao ny fampianarana video momba ny fampiasana ilay rindranasa, fampianarana video na torolàlana azo ampiharina amin'ny fampiharana izay anehoako anao tsikelikely ny fizotran'ny fanafenana sy ny famoahana ireo hafatra an-tsoratra sy sary.
Sintomy ny hafatra miafina Elite maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fomba hanafenana sary avy amin'ny Android handefasana azy ireo soa aman-tsara (ary koa hafatra)
Carlos ruiz dia hoy izy:
Mania inona raha tsy miteny encrypt, ary aleony ny teny hoe encrypt.
Valiny tamin'i Carlos Ruiz